Adobe jilitaankii waa software ah video tafatirka awood badan oo muhiim u ah labada xirfadeed iyo laylis video tifaftirayaasha. Daraasiin muuqaalada video tafatirka weyn waxaa la bixiyaa. Marka aad sixiddiisa videos aad la Adobe jilitaankii, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah talooyin Adobe jilitaankii waxtar leh si ay kaaga caawiyaan in aad u ordaan barnaamijka dhakhso badan oo si fiican u samayn tafatirka video ah. Halkan ugu waxtarka badan 10 talooyin ah ee la isticmaalayo Adobe jilitaankii Pro iyo Adobe jilitaankii Qaybaha waxaa lagu bixiyaa si aad tixraac.
Xoog qalab video tafatirka in ay jar, kala, darsamaan, isku shaandheyn, dhajisan, gooyay videos iyo sawiro iyo online si toos ah wadaagaan. Baro More >>
Isticmaal soo socda talooyin Adobe jilitaankii si aad video tafatirka fudud oo waqtiga iyo tamarta badbaadiyo. Samee geedi socodka sahlan badan aad u Malaynaynay.
Faa'iido leh Adobe jilitaankii Pro iyo Qaybaha talooyin
Adobe jilitaankii tip 1. Change goobaha default ah
Waxaad badbaadin karo qaar ka mid ah waqti video tafatirka la beddelo laba default goobaha: Miisaanka Media mashruuca Size iyo Default Picture Length. Waxaad tegi kartaa Edit> rabtid> General si aad u hesho labada saldhig. Media Miisaanka in Size Project ka dhigan sawir ama video cabiraad doonaa in size mashruuca. Goob Tani waxaad badbaadin doontaa waqti badan gaar ahaan marka aad isku qasin badan oo SD iyo HD video iyo sawiro. Default Picture Length asal ahaan waxa la dhigay 150 loox ama shan daqiiqo ee footage. Waxaad u bedeli kartaa in set kasta oo dalka buuraha leh ma u baahan tahay si inaad la qabsato sawir kasta oo aad soo dhoofsadaan. Marka aad ku dhameysatay kaalinta goobaha beddelo, ku dhacay "OK" si loo badbaadiyo.
Tip Adobe jilitaankii 2. Ciidamada video clips si toos ah uga fiidiyo
Xusuusnow in aadan u baahan tahay in aad si wadid aad u adag wareejiyo fiidiyo videos aad marka hore ka dibna keeno clips video in Adobe jilitaankii. Marka aad ku xiran aad fiidiyo ama qalab kale oo video qabsaday si aad u computer, dhigay fiidiyo ah in loo maqli karo ama dhigeen hab VCR. Markaas, in Adobe jilitaankii, bilowdo mashruuc cusub oo taga si File> Ciidamada in ay soo dhoofsadaan warbaahinta aad ka fiidiyo si toos ah. Tani waxay badbaadin doonto iyo qaar ka mid ah waqtigii Adobe jilitaankii video tafatirka.
Adobe jilitaankii tip 3. dhig mashruuca habaysan oo leh "Qolashada"
Waxaad riix kartaa "Folder" icon ee "Project" furmo suuqa si ay u abuuraan folder cusub in uu kaydiyo video clips ama waxyaabo kale. U kaydi si galalka badan oo kala duwan halkii ay kaliya mid ka mid ah si aad ka heli kartaa waxa aad si dhakhso ah doonayaan. Samee haamaha loogu kaydsado audio oo kala duwan, video, sawir, iwm Tani tip Adobe jilitaankii hubaal ka dhigaysa doono mashruuc aad u habaysan loona badbaadin karo waqtigii tafatirka.
Adobe jilitaankii tip 4. Create shakhsi kala guurka video
Marka saamaynta kala guurka si videos, waxaad samayn kartaa qaar ka mid ah dheellitirka saamaynta kala guurka ah si aad u shakhsiga. Waxaad ka helaysaa saamaynta kala guurka ee "Saameynta" tab. Oo "Saamaynta kontoroolha" tab, inaad la qabsato ay ka sida beddelista waqtiga muddada, beddelo animation galo, iwm
Adobe jilitaankii tip 5. Dooro qaabka ugu haboon ee wax soo saarka video
Qaado saarka video oo tayo leh si ay u tixgelin marka la samaynayo mashruuc cusub ee Adobe Premier. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad la wadaagto videos ku YouTube, ka dibna aadan u baahan tahay si ay u abuuraan HD videos sababta oo ah waxa aad qaadan doonta waqti badan geliyaan videos in ay Internet haddii ay tahay HD videos. Ka sokow, videos HD ayaa sidoo kale u baahan tahay meel lagu kaydiyo ka badan. Hel yar video size la riixo si fiican oo fudud u wadaagno videos on Web.
Tip Adobe jilitaankii 6. Quick Gudaan
In Adobe jilitaankii, saamaynta iyo videos ugu la moodo in waqtiga dhabta ah. Si aad u eegis ah oo ka buuxa oo dhan saamaynta, waxaad riixi kartaa "gala", taas oo abaal marin doonaa mashruuca iyo aad u saamaxaaya in ay ku eegaan guud ahaan saamayn video ee "La soco" window.
Talo: Adobe jilitaankii waa video editor aad u xirfad iyo kharash badan. Wixii bilaabayso video tafatir ah, waa jeedo fiican in qaar ka mid ah wey fududahay in la isticmaalo weli awood badan video editor, dhihi Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , kaas oo kaa caawin kara inaad u shidin DVD si toos ah iyo si ay u wadaagaan YouTube dhowr click. Haddii aadan rabin in kasta oo lacag video tafatirka, waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa qaar ka mid ah software free video tafatir sida Windows Kan sameeyey Movie ama iMovie.
> Resource > Video > 6 ugu waxtarka Adobe jilitaankii Talooyin wanaagsan Video Faalladaada